Tassel ntị ntị
Mgbaaka & Bangle
Nleta njem na ihe ngosi
N'IHI gịnị ka ịhọrọ danymia JEWELRY
site na nhazi na 20-06-08
Wulọ mmepụta nke Yiwu danymia ọla, ọfụma n'ichepụta ihe, ịzụlite ma chepụta ụdị ejiji dị iche iche, ọla ntị, mgbaaka, mgbaaka na ngwa ndị ọzọ. Anyị bụ otu n'ime ndị na-emepụta ọla kachasị mma nke na-erere ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa gburugburu ụwa, ma lekwasị anya na okike ...
1. Uwe isi: Isi na-ezo aka na ịchọ mma a na-eji gburugburu ntutu na ntị, imi na akụkụ ndị ọzọ. Enwere ike kee kpụrụ iche (1) ngwa ntutu, gụnyere ntutu ntutu, ntutu isi, ihe nkwọcha ntutu, okpu ntutu, ntutu isi, ihe mkpuchi ntutu, wdg, dị ka mkpịsị mkpa, mkpịsị alloy, ntutu isi diamond ...
G KN K NED NE NIILE NYERE gị
A na-eji akwa dị iche iche chọọ mma. A na-eyi uwe ndị nwere agba dị iche iche, a ga-enwe mmetụta dị iche iche, mara mma, chic, isi ike, na-adịghị mma, nke bụ nsonaazụ nke agba na agba nke ọla. Maka ndị nwere ụcha akpụkpọ ahụ na-acha uhie uhie, ị nwere ike ịhọrọ ọla mara mma, dịka chapleti na-acha uhie uhie, imi ...
Ilekọta Ihe ịchọ Mma Gị
1.Chọpụ ọla gaa n’ebe siri ike, bumps na nhịahụ ga-eme ka mkpuchi ahụ agbatịchaala ngwa ngwa. 2. Jiri akwa dị ọcha hichaa ọla gị. Ọ nwere ike inye aka wepu unyi elu ma yipụ akwa ahụ. 3. Jiri nwayọ tee ọla ahụ na - adịghị mma ọfụma ...
okwu NO.90 ， Chunhan South Road ， Beiyuan Street, Yiwu, China